Grace Mugabe, 29 Chikunguru 2019
Dare Rinoudzwa Kuti Amai Mugabe Havafanirwe Kupihwa Diplomatic Immunity
Amai Mugabe vakarova Muzvare Gabriella netambo yemagetsi pane imwe hotera muna Nyamavhuvhu gore rapera.
Kukadzi 17, 2018
‘Degree’ Rakapiwa Amai Mugabe Rosungisa VaNyaguri
Mukuru we University of Zimbabwe, muzvinafundo Levi Nyagura, vamiswa pamberi pedare neMugovera vachipomerwa mhosva yehuori panyaya yekupa ‘degree’ repamusoro, rePhD, kuna Amai Grace Mugabe muna 2014
Imwe nhengo yeZimbabwe Anti Corruption Commission, VaGoodson Nguni, vaudza Studio7 kuti vachaongorora nyaya yaAmai Mugabe, asi vakati iri kure chose sezvo paine dzimwe nyaya dzakawanda dzavari kutarisa.
VaMugabe neMudzimai Wavo Vobviswa paNzvimbo Yavanonzi Vakapamba
Sangano revatendi reReformed Church in Zimbabwe, RCZ, ranyorera tsamba mhuri yevaimbova mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, ichivapa mazuva manomwe ekuti vabve pasitendi yavanonzi vakapamba gore rapera.
Kusiya Basa kwaVaMugabe Kofadza Vazhinji
Kusiya basa kwaVaMugabe kofadza vazhinji munyika nekunze. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti kusiya basa kwaVaMugabe avo vaitonga nechisimba kwemakore mazhinji kwavakuvapa tariro yekudzokere kumusha. Vamwewo vanoti VaMugabe vakaita mabasa akanaka uye vanofanirwa kuremekedzwa.
Veruzhinji Vofarira Kusiya Basa kwaVaMugabe
Veruzhinji vofarira kusiya basa kwaVaMugabe nhasi. VaMugabe vazivisa kuti vasiya basa nhasi mutsamba yavanyorera mutauriri weparamende VaJacob Mudhenda. Nyaya ina Mavis Gama.
Vamwe Vatsigiri veZanu PF Vanotsigira VaEmmerson Munangagwa Votamba Pamusangano weCentral Committee Pakadzingwa VaMugabe
Dzimwe nhengo dzeZanu PF dzinotsigira VaMnangagwa votamba mushure mekudzingwa kwa VaRobert Mugabe nemudzimai wavo mubato reZanu PF. Izvi zvakaitwa pakaturwa zvisungo zvedare reCentral Committe yeZanu PF muHarare. Nyaya ina Patricia Mudadigwa.